EPL: Mane oo maraqa ka cabay Man City…+ SAWIRRO – Gool FM
EPL: Mane oo maraqa ka cabay Man City…+ SAWIRRO
(Southampton) 01 Maajo 2016 – Kooxda kubadda cagta Southampton ayaa guul wayn kaga gaartay garoonkeeda naadiga Manchester City, kulan ka tirsan horyaalka Premier League, iyadoo uu saddexleey ka dhaliyey Sadio Mane.
Man City ayaa goolka looga naxsaday daqiiqaddii 25’aad ee qeybtii hore waxaana ugu shubay Shane Long, iyadoo uu goolka labadna raacsaday 28’daqiiqo Sadio Mane, laakiin inta aan la aadin qeybta nasashada waxaa hal gool u soo celiyey Man City xiddigooda Kelechi Iheanacho, sidaas ayaana lagu kala nastay Man City oo lagu hoggaaminayo 2-1.
Markii dib la isugu soo laabtay qeybta labaad ee ciyaarta Sadio Mane ayaa labo gool oo deg deg ah ka dhaliyey Man City daqiiqadihii 57’aad iyo 68’aad, waxaana uu sidaas ku buuxsaday saddexleeydiisa kulankan, isagoo ciyaarta ka dhigay 4-1 looga gacan sarreeyey City.
Mane waxa uu sidaasi ku noqday laacibka labaad ee Premier League saddexleey ka dhaliya goolhaye Joe Hart, kaddib Gabriel Agbonlahor oo ka dhaliyay bishii August sanadkii 2008-dii.
Kelechi Iheanacho ayaa Man City goolkii labaad u keenay kulankan, waxaana uu ahaa goolkiisii labaad oo uu dhaliyo kulankan, sidaas ayaana kulanku ku soo dhammaaday 4-2 lagu dardaray kooxda Man City.
Tan iyo sanadkii 1995-kii Man City marna ma ay guuleysan kulan Premier League oo lagu hoggaaminayo gool, isla markaana ay ku ciyaareyso meel ka baxsan garoonkeeda, 79-jeer ayaa laga badiyay, 11-jeerna bar-baro ayey gashay.
Joe Hart ayaa saftay kulankiisii 300-aaad ee Premier League waana goolhayihii 6-aad oo Ingiriiska ah oo sidaa sameeya.